China Runjin © Krunt ™ -RM35 Ice cream igwe rụpụta na ụlọ ọrụ | Runchen
Runjin © Krunt ™ -RM35 Igwe Friiz
Ejiri ya na akpaghị aka na-aga n'ihu na-emepụta ice cream na mmanya, ice-lolly ma ọ bụ ihe ọ juiceụ juiceụ ice-lolly.
Ekwesịrị imepụta ngwaahịa mmanya na-esote usoro isii a:
1 Wunye ice cream n'ime iko ebu
2 Wunye ogwe osisi n’ime ice cream
3 Ghaa ice cream na mmiri nnu nnu na -40 ℃
4 Jiri nwayọ gbazee mmiri ice cream na mmiri nnu dị nro na + 15 ~ 25℃
5 Wepu ice cream ahụ n'ime iko ebu
Mee ka ice cream dị n'elu igwe nkwakọ ngwaahịa ahụ
N'oge usoro njem site na ịdọpụ gaa na iwepụ, a pụrụ itinye chocolate chocolate dị elu nke ice cream. Mgbe a na-ekpuchi ice cream na chocolate, mkpụrụ osisi a mịrị amị nwekwara ike kpuchie elu.
N'oge usoro njem site na ịdọpụ gaa na iwepụ, a pụrụ itinye chocolate chocolate dị elu nke ice cream. Mgbe a na-ekpuchi ice cream na chocolate, mkpụrụ osisi a mịrị amị nwekwara ike kpuchie n'elu.
Ikike Abụba 10%
Ike nke ụdị ngwaahịa bụ Mmiri ara ehi na-abụghị abụba Ọzọ
n'ozuzu 21000 ka 36000 kwa awa. Ihe Sugar (sucrose) 12.0%
ike nke mmiri ice ngwaahịa bụ banyere 20% Sirop 5.0%
dị ala karịa nke ice cream. N'ezie Mmako 0,5%
ikike nwere ike ịdabere na ụfọdụ ihe gụnyere: Total siri ike okwu 38.0%
l Ọtụtụ ndị na-akpụ akpụ ice cream Mmiri 62.0%
l ibu ice creams n'ahịrị nke ọ bụla Na ngụkọta 100%
A na-agbanye iko iko ahụ nke ice cream kpụkọrọ akpụkọ na tebụl na-agbagharị okirikiri ma tinye ya na mmiri nnu ahụ. A na-eji pan anaghị akpụzi rụọ ihe eji akpụzi pan. Na ọkọlọtọ ebu ọkọlọtọ, e nwere iko iko 16 n'ahịrị nke ọ bụla, na ọnụ ọgụgụ iko bụ 16x126 = 2016. Ihe kachasị dị na ngwaahịa dabara na ahịrị 126 nke iko iko bụ 24 mm. A na-enyekwa m ebu ebu na nkọwapụta ndị ọzọ (lee “ngwa nhọrọ”).
Mpempe akwụkwọ ebu nke RM35 nwere ike mepụta ice cream kacha ogologo na ogologo nke 144 mm (5.67 ”). Ogwe ahụ etinyere na ice cream ma ọ bụ ice-lolly kwesịrị ịdị n'elu ihe nkedo ebu ma ọ dịkarịa ala 30 mm (1.18 ").
Nnukwu nnu mmiri
Mmiri okirikiri a na-ejikọ okirikiri bụ nke a na-agbanye mgbanaka igwe anaghị agba nchara ma nyekwa ya ihe mkpuchi ọkụ. Ejiri ya na mgbapụta nke centrifugal nke onwe ya. A na-edozi onye na-achịkwa okpomọkụ iji gbochie akụrụngwa ịhapụ ọrụ na oke okpomọkụ. Ọnọdụ okpomọkụ nke mmiri nnu nnu ga-ejedebe n'okpuru 25 ogo n'oge ọ bụla iji chebe pan ebu site na nnukwu nrụgide ọkụ.
Main ịnya ụgbọ ala usoro
A na-arụ ọrụ ndị isi niile site na usoro nke cam na-achịkwa. Ọrụ ndị na-enyere aka na ọrụ ndị ọzọ chọrọ ikike dị nta na-achịkwa sistemụ ikuku na-achịkwa. Ọsọ nke 35 usoro ahụ nwere ike ịbụ ahịrị 10 ruo ahịrị 30 kwa nkeji.
A na-etinye akụrụngwa eletriki na igwe eletriki igwe anaghị edozi, gụnyere onye na-emebi ihe, onye na-emebi ihe, onye na-echekwa moto, na-achịkwa relay iji chịkwaa kpo oku, onye na-agbanwe ihe iji chịkwaa voltage na ngụ oge.
A na-achịkwa arụmọrụ ahụ site na nchịkwa nchịkwa arụnyere na igwe. Ọrụ niile na-achịkwa PLC. Ọ bụ nke ukwuu akpaka. Ogwe njikwa na-agụnye bọtịnụ, ihe ngosi, na ihe ngosi dijitalụ iji gosipụta okpomọkụ evaporating na ọnọdụ okpomọkụ nke mmiri nnu nnu. A na-ejikwa elektrik achịkwa okpomọkụ nke mmiri nnu nnu na-ekpo ọkụ ma gosipụta ya na ngalaba nchịkwa. Ngosiputa nke puru igosiputa onu ogugu na onu ogugu nwere ike inye ihe omuma maka oru na nyocha. Enwekwara mkpu. Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, nnukwu-ọnụ ọgụgụekwesịrị inye.
Ngwa nhicha na nwoke ịga ụlọ ọgwụ
Iji hichaa ma sterilaiz ebu pan na saịtị ahụ, a na-etinye akụrụngwa nhicha na ụgbọ oloko na-akwado mmiri tankị nnu. Akụrụngwa kwesịrị ijikọ na mmiri, uzuoku na nhicha nhicha.
Sistemụ usoro jụrụ oyi anaghị agụnye evaporator eji maka mgbanwe okpomọkụ nke mmiri nnu. Ejiri Amonia dị ka ihe jụrụ oyi. Usoro sistemụ nke abụọ bụ sistemụ ịsa mmiri oyi. Mmiri nnu dị oyi na-ekesa ya na mgbapụta axial. Ejiri igwe anaghị agba nchara na-ekesa mmiri mmiri nnu.
Mmiri nnu dị ọkụ na-ekpo ọkụ na ọkụ eletrik ma ọ bụ uzuoku. Ihe eji eme ihe kwesiri ịhọrọ otu mgbe ị na-enye iwu. A na-agba mmiri nnu ahụ na ihu nke iko ebu site na usoro nchacha mmiri. Usoro nzacha bụ
kọmputa na -ekwurịta okwu na Central akara kọmputa nwere ike nyere iji dochie ọkọlọtọ PC (lee “nhọrọ equipments”).
Ejiri ọkọlọtọ ice cream na-ejuputa akụrụngwa ka ọ bụrụ ihe eji emejupụta ihe n'ụdị drọm, nke ejiri mejupụta ihe ndị ahụ site n'elu. Ọ na-agụnye ọkpọkọ kọlụm na isi ndochi. Enwere ike gbanwee ngwa ngwa juputara na arụnyere n'elu.
Manual mmanya ịkwụnye igwe
Ọ na-akpaghị aka plọg mmanya n'ime ice ude. Ejiri aka mechie ihe nkedo. Ọ gụnyere igbe nchekwa maka ịchekwa Ogwe.
Ngwaọrụ na-agụnye onye na-ebufe ihe n'ahịrị. 56 na-ahapụ ogwe aka ya na ihe mgbochi mmanya dị na ngwa ahụ. A na-eji ihe nchara / igwe anaghị agba nchara. Ntọhapụ nke ngwaahịa emechaala site na mgbada ala nke ogwe aka na-agbapụta, na ngwaahịa a na-ebuga ya na igwe nkwakọ ngwaahịa. Enwere ike ịhọrọ akụrụngwa na-ewepụta ngwa ngwa (lee “ngwa nhọrọ”).
Ngwongwo mkpuchi chocolate
A na-etinye ngwá ọrụ na nzọụkwụ ọzọ nke ngwaọrụ ịhapụ. Ọ gụnyere tankị chọkọletị na pan na-enweta ihe na mmanya ịkachasị. Enwere ike gbanwee elu nke tankị chocolate dị ka ihe achọrọ maka ịdị elu nke mkpuchi chocolate. Tankị mpụga na mgbapụta okirikiri
01 Otu agba agba agba agba ice cream
03 Dejupụta ngwa na-agagharị
04 Ihe agba agba agba nke nwere agba n’ime ala
05 Ihe agba agba abụọ nwere agba dị iche iche
06 Abụọ nwere agba ice ude kewara ekewa “zebra ụkpụrụ” ndochi ngwá
07 Ihe eji acha uhie uhie abuo nwere agba abuo
08 Abụọ-acha ice ude horizontally kewara ndochi ngwá
09 Ihe eji eme mmiri ice nwere agba otu
10 Ice cream ndochi ngwa ya na ndochi shei mmiri ice na isi ice cream
11 Ihe eji acha mmiri mmiri nwere otu agba. Ngwaahịa dị n'ahịrị ọ bụla (radial) dị na agba abụọ (ma ọ bụ atọ ma ọ bụ anọ agba)
12 Igwe mmiri na-acha agba agba nwere eriri kewara ekewa
13 Pensụl jupụtara na ice cream jupụta ngwa
14 Snow-mire mmiri ice ndochi akụrụngwa, gụnyere odori na-akpụ akpụ ngwá na ndochi ihe ngwusi
15 Akọrọ akọrọ (ya na mkpụrụ osisi mịrị amị dị ka nut na swiiti) akụrụngwa akụrụngwa
16 Na-ejuputa akụrụngwa maka ice cream na-ejuputa na mmiri
18 mgbapụta ọdụ na chocolate tank nke
100 L ikike, jaket mmiri na kpo oku eletriki na akpaka njikwa njikwa njikwa na eletriki chocolate na-ekesa mgbapụta. The tank na-nyere na-akpụ akpụ castor wheel na jikọọ na sooks nke RM35.
21 Carbon nchara ma ọ bụ igwe anaghị agba nchara nchekwa maka ebu pan
22 Ihe mgbakwunye akụkụ abụọ maka mmepụta afọ abụọ
23 Onye na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ na mmiri na-ekpo ọkụ
24 Ikwukọrịta nkeji na-ekwurịta okwu n'etiti kọmputa
25 Ebu pan na dị iche iche na iko iko na ahiri nọmba nhazi
26 Ihe eji arụ ọrụ nke ọma iji wepụta ọtụtụ igwe nkwakọ ngwaahịa
Isi mbanye 3 kW (4 HP) Mmiri mmiri nnu dị nha 11 kW (14.8 HP) Mgbapụta mmiri nnu nnu 1.1 kW (1.5 HP) Chocolate anata pan 0.8 kW (0.5 HP) Ngwa mkpuchi akọrọ 1.1 kW (1.5 HP) Mgbapụta mgbapụta moto 2.2 kW (3 HP)
Enwere ike ịme oku nke mmiri nnu nnu site na ikpo ọkụ eletrik ma ọ bụ kpo oku uzuoku. Ekwesiri ikwenye ya mgbe onye ọrụ na-enye iwu.
Oke nwụnye mmetụta
Ọkọlọtọ eletriki njikọ 3x380 V, 50 HzAC gosiri ibu 180 Amps
Isi emebi 250 Amps
-Steam kpo oku ebu ahapụ 20 KW
-Electric kpo oku ebu ahapụ 101 KW Ugbo ala nsogbu uzuoku 100 KG / H Oke oriri na mmepụta 55 ~ 75% 150 L chocolate akpa 3 KW
Isi ike USB kwekọrọ na mpaghara nkọwapụta.
Mgbapụta mgbasa nke nnu mmiri na-enye mmiri nnu:
Main uzo mmiri anwụrụ nke abịakọrọ ikuku:
Dayameta nke akụrụngwa ice cream adịghị ala karịa dayameta mmepụta nke igwe ikuku.
Nnu mmiri nnu
6000 L / 7700 n'arọ
Oriri nke ikuku abịakọrọ
Ọkọlọtọ igwe 0.9 m3/ min
Opekempe arụ ọrụ nrụgide 7 Ogba Oke igirigi nke kwekọrọ na nrụgide nke ikuku + 5 ℃
Nkịtị na-arụ ọrụ okpomọkụ Mmiri na-ekpo ọkụ -45 ℃ Okpomọkụ nke mmiri nnu nnu -40 ℃ Okpomọkụ nke mmiri nnu nnu +20 ℃
Ike kachasị nke evaporator 325 KW 279000 Calorie kwa elekere na -45 ℃
Na ọnọdụ "njikere ịrụ ọrụ" banyere: 24000 n'arọ
Net nha 16350 n'arọ
Gross arọ 20500 n'arọ
Mpịakọta 100 m3
Total arọ 3200 mm
Elu nke ebu pan na ala 1660 mm Ohaneze chọrọ ohere site na ala ruo n'uko
Nke gara aga: Runjin © Krunt ™ -EX800 Extrusion na Slicing Line maka Ice Ude
Osote: Runjin © Krunt ™ -2000 Mkpụrụ igwe Na-agwakọta
Runjin © Krunt ™ -EX800 Extrusion na Slicing Line ...